လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်အတွင်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်
Mar 29, 2021 1 min read Saved Articlesနွေဦးတော်လှန်ရေး
မနေ့က ကလေးမြို့ကပြန်ခံတိုက်လို့ စစ်သား၄ယောက်သေတဲ့သတင်း၊ ဒီနေ့တောင်ဒဂုံကြံ့ကြံ့ခံနေလို့ လောင်ချာဗုံး (RPG) နဲ့ ပစ်တဲ့သတင်းစတာတွေကိုကြည့်ပြီး ပြည်သူလူထုက ခုခံစစ်နဲ့ တန်ပြန်စစ်ကို သဘောကျလာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။ ပြည်ပကိုကြည့်တော့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဖိနှိပ်ရက်စက်မှုကို နိုင်ငံတကာက အံ့အားသင့်ပြီးရင်း အံ့အားသင့်ရ၊ တခုရှုတ်ချလို့မှမဆုံးခင် နောက်တခုပိုဆိုးတာ ထပ်ပေါ်လာတာတွေတွေ့နေရတယ်။ ဘိုင်ဒင်တို့ ဘလင်ကင်တို့ ဘာပြောသလည်း သတင်းတွေလည်း တွေ့ခဲ့ကြပြီးပြီမို့ အကျယ်မရေးတော့ပါ။ သံတမန်ရေး၊ နိုင်ငံရေးနဲ့ လူသားဆိုင်ရာတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းရေးတွေ အလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာ နိုင်ငံတကာကလည်း သဘောပေါက်လာကြတာတွေ့ရတယ်။
ရှေ့ဆက်တာနဲ့အမျှ နယ်မှာစစ်ပွဲတွေ၊ မြို့ပေါ်ပျောက်ကြားစစ်တွေက ကနေ့ဆန္ဒပြပွဲတွေလို တွေ့ကြဖို့ ရှိနေတယ်။ ရှေ့၁၀နှစ်လောက်က တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ၊ အဖွဲ့တွေ၊ အခေါ်အဝေါ်တွေ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဥ် စတာတွေအကြောင်း အနည်းငယ် ပြန်စောင်းငဲ့ကြည့်ရအောင်။
၂၀၀၈ ခြေဥနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တယ်။ သိန်းစိန်အစိုးရတက်တယ်။ တပြိုင်နက်တည်းမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF – Border Guard Force) နဲ့ ပြည်သူ့စစ် (PMF – People’s Militia Force) ဆိုတာ‌ပေါ်လာတယ်။ ကချင်မှာ ၅နေရာ၊ ကယားမှာ ၅နေရာ၊ ကရင်မှာ ၆နေရာ နဲ့ ရှမ်းမှာ အများဆုံးပဲ အစိတ်သုံးဆယ် နီးပါး ရှိတယ်။ တနေရာမှာ အနည်းဆုံးတဖွဲ့ ရှိတယ်။ တချို့နေရာတွေက နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖြစ်ပြီး တချို့ နေရာတွေက ပြည်သူ့စစ်ဖြစ်တယ်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်က စစ်တပ်ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအောက်မှာရှိတယ်။ ပြည်သူ့စစ်တပ်တွေကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲမပါပေမယ့် စစ်တပ်ရဲ့ ဦး‌ဆောင်ထိမ်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတယ်။
၂၀၁၁ - ၂၀၁၅
၂၀၁၁။ ။ ပြည်ထောင်စုအဆင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေစ။ အစိုးရနဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၁၄ဖွဲ့ ချင်းမိုင်မှာ UNFC (United Nationalities Federal Council) ဖွဲ့
၂၀၁၂။ ။ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ (MPC – Myanmar Peace Centre) တည်ထောင်
၂၀၁၃။ ။ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းမှုဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ( UPWC – Union Peace-Making Work Committee) နဲ့ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအသင်း (NCCT – Nationwide Ceasefire Coordination Team) အဖွဲ့တွေ ဖွဲ့တယ်။ UPWC အဖွဲ့ကို သမ္မတသိန်းစိန်က လူရွေးပေးပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီကအတည်ပြုတယ်။ ဒုသမ္မတ စိုင်းမောက်ခမ်းက ဥက္ကဌဖြစ်တယ်။ NCCT ကိုတော့ လိုင်ဇာမှာဖွဲ့တာဖြစ်တယ်။ အဲမှာ တိုင်းရင်းသား ၁၆ဖွဲ့ပါတယ်။ တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA – Nationwide Ceasefire Agreement) မူဘောင်ဆွေးနွေးပွဲတွေပေါ်လာတယ်။ ပထမဆုံးဆွေးနွေးပွဲကို မြစ်ကြီးနားမှာ လုပ်တယ်။
၂၀၁၄။ ။ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်း (EAO – Ethnic Armed Organization) တွေကြား အင်စီအေစာသားတွေမှာ သဘောတူညီချက်ရလာတယ်။
၂၀၁၅။ ။ အစိုးရနဲ့ တိုင်းရင်းသား ၈ဖွဲ့ကြားမှာ NCA လက်မှတ်ထိုးတယ်။ လမ်းပြမြေပုံ ၇ချက်ထွက်တယ်။
၂၀၁၆ - ၂၀၁၈
၂၀၁၆။ ။ အင်အယ်ဒီအစိုးရတက်တယ်။ မြန်မာငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာကို အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကော်မတီ (NRPC – National Reconciliation and Peace Committee) လို့နာမည်ပြောင်းတယ်။ လမ်းပြမြေပုံအသစ်ထုတ်တယ်။ ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံစတယ်။
၂၀၁၇။ ။ NRPC က ငြိမ်းချမ်းရေး‌ကော်မရှင် ၂ခုနဲ့ ၂၁ပင်လုံ (၂) ကျင်းပတယ်။ PPST ပေါ်လာတယ်။ ရခိုင်ပြဿနာပေါ်တယ်။
၂၀၁၈။ ။ နောက်ထပ်တိုင်းရင်းသား ၂ဖွဲ့ အင်စီအေထိုးတယ်။ ပေါင်း ၁၀ဖွဲ့ဖြစ်လာတယ်။ ၂၁ ပင်လုံ (၃) လုပ်တယ်။ ကုလအထွေထွေညီလာခံကို ရခိုင်ပြဿနာရောက်တယ်။ ခုပြောနေကြတဲ့ အိုင်စီစီ၊ R2P ဆိုတာတွေ စကြားလာရတယ်။
NCA ထိုးတဲ့ အဖွဲ့၁၀ဖွဲ့
၁။ ကရင် (KNU)
၂။ ချင်း (CNF)
၃။ ပအို့ (PNLO)
၄။ ရခိုင် (ALP)
၅။ ကျောင်းသားတပ်မတော် (ABSDF)
၆။ ကရင်ဗုဒ္ဓဘာသာ (DKBA)
၇။ ရှမ်း (RCSS/ SSA)
၈။ ကရင် (KNU/ KNLA)
၉။ လားဟူ (LDU)
၁၀။ မွန်ပြည်သစ်ပါတီ (NMSP)
ပထမ ၈ ဖွဲ့က ၂၀၁၅မှာထိုးပြီး နောက်၂ဖွဲ့က ၂၀၁၈မှာထပ်တိုးလာတဲ့အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်။
၁။ ကရင်နီ (KNPP)
၂။ ရခိုင် (ANC)
၃။ ကချင် (KIO/ KIA)
၄။ ရှမ်း (SSPP/ SSA)
၅။ ရခိုင် (AA)
၆။ ဝ (WNO)
၇။ ဝ (UWSA)
၈။ ပလောင်/ တအောင်း (PSLF/ TNLA)
၉။ ကိုးကန့် (MNDAA)
ကိုးကား။ ISDP. The Asia Foundation. BNI (Myanmar Peace Monitor) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်များ
Credit to Kyaw Zaaw Khine | Facebook